WINDOWS အတွက်ကို ANDROID EMULATOR (အဖွင့်ပွဲဂိမ်းနှင့်အန်းဒရွိုက်ဆော့ဖ်ဝဲကို) - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အိမ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Android app များ run ဖို့ဆုံးဖြတ်သောသူတို့အားအသုံးဝင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးတက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်း loading မတိုင်ခင်လျှောက်လွှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ချင်လျှင်, ကောင်းစွာ, ဒါမှမဟုတ်ပဲမဆိုဂိမ်းကစားချင်တယ်, ပြီးတော့ဒီက Android emulator မပါဘဲမဖြစ်နိုင်ပါပါ!
ဤဆောင်းပါးသည် Windows နှင့်မကြာခဏအသုံးပြုသူအများစုအတွက်ပေါ်ထွန်းသည်ဟုပုံမှန်မေးခွန်းများကိုများအတွက်အကောင်းဆုံး emulator ၏လုပျငနျးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ...
1. ကို Android emulator ရွေးချ
2. BlueStacks Install လုပ်ပါ။ ဖြေရှင်းချက်မှားယွင်းနေသည် 25000 အမှား
3. emulator တက်သတ်မှတ်မည်။ အဆိုပါ emulator အတွက် app တစ်ခုသို့မဟုတ်ဂိမ်းကိုဖွင့်ပြီး?
ယနေ့အထိ, ကွန်ယက်, သင် Windows အတွက်ကို Android emulator များစွာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ:
1) ကို Windows က Android;
3) BlueStacks App ကို Player ကို;
ကျနော့်အမြင်တွင်, အကောင်းဆုံးများထဲမှ BlueStacks ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်သူက install လုပ်ပြီးနောက်အခြား emulator နှင့်အတူတွေ့ကြုံသောသူအပေါင်းတို့သည်အမှားအယွင်းများနှင့်အဆငျမပွမှေုပြီးနောက် - အခြားအရာတစ်ခုခုပျောက်ရှာပေးဖို့အလိုဆန္ဒ ...
တရားဝင်။ Website: //www.bluestacks.com/
Windows7ကို, 8: - ကအားလုံးကိုလူကြိုက်များ operating system များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
ပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလှဆင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကြောင့် မကြာခဏရှိအမှားတွေဖြစ်ကြပြီးဖြစ်သောကြောင့်မေးခွန်းများကို၏ဤအများကြီး၏။ ကျနော်တို့ခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းသွားပါလိမ့်မယ်။
1) ရုံးကနေ installer ကိုဖိုင်ကို download လုပ်ပါ။ site နှင့်ပြေး။ ကျနော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မည်ကြောင်းပထမဦးဆုံး window ကိုအောက်ကပုံထဲမှာကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ (လာမယ့်) ပိုပြီးသဘောတူနှိပ်ပါ။
3) လျှောက်လွှာကိုစတင် install ရမည်ဖြစ်သည်။ နှင့်ဤအချိန်အတွက်အလွန်မကြာခဏမှားယွင်းမှုတစ်ခု "မှားယွင်းနေသည် 25000 ... " ရှိပါတယ်။ ရုံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြောင့်ဖမ်းဆီးရမိပုံရိပ်အပေါ် ... "OK ကို" Hit နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ installation ကိုရပ်လိုက် ...
သင်တစ်ဦးလျှောက်လွှာကို install ပါလျှင်, သင်သည်ဤဆောင်းပါး၏တတိယအပိုင်းကိုတိုက်ရိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။
4) ဤ fix စေရန်,2အမှုတို့ကိုပြု:
- သင့်ကိုဗီဒီယိုကဒ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းကို update ။ ဤသည်အကောင်းဆုံးကိုသင်၏ဂရပ်ဖစ်ကဒ်၏ search engine ကိုမော်ဒယ်အတွက်စာရိုက်ခြင်းဖြင့်တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက AMD ၏ဆိုက်နှင့်ပြုမိသည်။ သင်မော်ဒယ်ကိုသိမထားဘူးဆိုရင် - ကွန်ပျူတာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဆုံးဖြတ်ရန် tool ကိုသုံးပါ။
- အခြား installer ကို BlueStacks download လုပ်ပါ။ သငျသညျအပလီကေးအမည် "BlueStacks_HD_AppPlayerPro_setup_0.7.3.766_REL.msi" အောက်ပါတစ်ခုခုကို search engine အတွက်မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ် (သို့မဟုတ်သင်ဒီမှာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်) ။
ယာဉ်မောင်း AMD ၏ကတ်များကိုအသစ်ပြောင်းခြင်း။
သငျသညျဗီဒီယိုကဒ်ယာဉ်မောင်းများနှင့်ဗားရှင်းအသစ်၏ပစ်လွှတ်ကို update ပြီးနောက် 5) - installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြန်ဆန်အမှား-အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ 6), သငျသညျ, ဥပမာ, ဆွဲပြိုင်ပွဲဂိမ်းကို run နိုငျပါသညျ! ။ ကိုအောက်တွင်ကြည့်ရှုပါ - ကို set up နှင့်ဂိမ်းများနှင့်အစီအစဉ်များကို run ဖို့ဘယ်လိုပေါ်သတင်းအချက်အလက်သည်။
1) emulator စတင်ရန် - ပွင့်လင်းသည် Windows Explorer နှင့်လက်ဝဲကော်လံသင်တစ်ဦး tab ကို "Apps ကပ" ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါသင်သည်နာမည်တူနဲ့တံဆိပ်ကို run ။
2), အ emulator ၏အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ချက်များလုပ်အောက်ပိုင်းညာဘက်ထောင့်ရှိ "Settings" ကို icon ကို click ပါရန်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ Screenshot ကိုကြည့်ပါ။ စကားမစပ်, သင်အနည်းငယ်တက်မသတ်မှတ်နိုင်သည်
- မိုဃ်းတိမ်မှ connection ကို;
- (ကို default ရုရှားဖြစ်ပါတယ်) အခြားဘာသာစကားကို select;
- ပြောင်းလဲမှုကီးဘုတ် setting များကို;
- applications များစီမံခန့်ခွဲ;
3) ထိပ် menu ကနေပဲ tab ကို "ဂိမ်း" ကိုသွားပါ, တစ်ဦးဂိမ်းအသစ်ကို download လုပ်ပါရန်။ သငျသညျအဆင့်၏နိုင်ရန်အတွက်ခွဲထားခဲ့သည်ဂိမ်းများစွာ, ဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုမီ။ အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်အလိုအလျောက် installed ပါလိမ့်မည်ပေါ်လာဖို့ကို download ဝင်းဒိုးကို - သင်ကြိုက်နှစ်သက်ဂိမ်းပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
4) ဘယ်ဘက်ထိပ်မှာ Menu ထဲမှာ "ကျနော့် Apps ကပ" အပိုင်း () ကိုသွားပါ, ဂိမ်းကိုစတင်ရန်ရန်။ Next ကိုသင်တစ်ဦးထည့်သွင်းလျှောက်လွှာလည်းမရှိတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ငါဘာမှမနဲ့တူ, သင် play နိုငျသညျ, ဂိမ်း "ဆွဲပြိုင်ပွဲ" ကိုဒေါင်းလုဒ်နှင့် run ဖို့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်။ 😛